SPY366 - OMG GLADE Kamera miafina miafina miafina miafina - Vahaolana OMG
SPY366 - Fakan-tsary miafina miafina miafina OMG GLADE
(1) Fanaraha-maso sy fandriam-pahalemana toy ny trano fonenana, trano fonenana, trano famakiam-boky, garderie, trano fidiovana, trano fonenana, ary bebe kokoa.
(2) Ny fakan-tsary an-trano, ny biby fiompy biby dia manara-maso na manamarina fa ny havana aman-tsakaizanao dia voaro sy salama.
(3) Ny kamera dia miaro ny tokantranonao amin'ny alàlan'ny fiarovan-trosa.
Ny vahaolana Wireless Wireless Chip izay vao avy dia mitondra fifandraisana tsy miovaova sy miorina amin'ny WIFI.
Ity efijery amin'ny efijery hafahafa ity dia momba ny 30m, izay mamela anao hametraka ny fakantsarinao amin'ny sitrapo.
Video Resolution: True HD 1280x720P, Mitondrà lahatsary avo lenta sy sary avo lenta
Batterie lithium 4000 mAh namboarina: maharitra 400 minitra maharitra.
MAX manohana ny karatra SD SDN.
Volo kely sy volom-bolo kely, mba hahafahanao manafina azy mora foana raha tsy voamarikao. Birao, fitsangatsanganana, fivarotana, trano fonenana ho an'ny fampiasana hafa (ankizy, biby fiompy, nitaiza, antitra).
Voasakana ny fanoratana ny loop mba handika ny antitra indrindra amin'ny rakitra vaovao.
Famantarana ny môtô: Rehefa manomboka ny fihetsiketsehana dia manomboka ny fandraisam-peo automatique.
Datim-potoana miavaka sy daty mahazatra.
Ny vokatra dia fitaovana amin'ny 2.0 fampiasa haingam-pandeha haingam-pandeha, mihamatetika haingana, mandany fotoana fohy kokoa.
Amin'ny alàlan'ny herinaratra finday, tsindrio ny sandry
Torohevitra mafana: Satria ity dia fakantsary kodiarana, azafady azafady mba hikolokolo ny kabla ary hiaro azy io.
Mifampitantana ny Camera: Raha hijery ny lahatsary amin'ny fotoana mety dia manana fomba 2: ny iray dia fijerena mivantana amin'ny alàlan'ny fifandraisana WIFI. Ny hafa dia lavitra lavitra ny fijerena lavitra
Fitaovana tsotra ny APP, manara-maso tsotra sy mora ampiasaina.
Video Resolution: True HD 1280x720P, Mitondrà lahatsary avo lenta sy sary avo lenta.
Ny karazana bokotra samihafa samihafa ho an'ny fahasamihafanao samihafa mifototra amin'ny tontolo iainanao manome anao ny safidy mba hitafy kapila hafa amin'ny kapila, izay mahatonga azy ho mora ny manafina sy mitondra.
Support ny firaketana sy famandrihana amin'ny fotoana iray ihany,
Support horonan-tsary fanoratana,
Support XFX micro-tf karta ao amin'ny Max (Not Included)
Tohano ny fifandraisana eo an-toerana sy an-telefaona, fifandraisana WiFi momba ny 30m, fitantanana ny Password mba hiarovana ny fiainanao manokana.
Soso-kevitra: Ny fepetra fampifandraisan-davitra dia miantoka fa ny finday dia afaka miditra amin'ny Internet: WIFI OR finday finday.
Fanamarinana Motion: Rehefa hita ny fihetsiketsehana, dia manomboka ny fandraisam-peo automatique ny fakantsary. Ary amin'ny Video Recording Real-Time, ity gadget-n'i Mini ity dia hanoratra amim-pahatokiana ny hetsika tsy nampoizin'ny vahiny ao anatin'ny fotoana fohy ary ny lahatsary amin'ny horonan-tsary dia1 minute.Support an-tsarimihetsika an-tsary.
Famahana video: True HD 1280x720P,
Bateria Lithium: 4000 mAh
Fanoratana lahatsary maharitra: 400 minitra.
Mifandray amin'ny finday / tablety / PC mivantana amin'ny alalan'ny fikarohana siantifika WiFi fakantsary. Azonao atao ny mijery lahatsary avy amin'ny fakan-tsary amin'ny fotoana.
Tsy mila router WiFi handefa.